Ngowe-1980, ngexesha lexeshana phakathi kwe- punk rock kunye nomtsalane omtsha , umculo ogqithiseleyo wawunomfanekiso wokugubungela i- rock style okanye uhlobo oluthile lwamatye okuqala, njengoko i-video yobudala yayingakabonakali ukutshabalalisa kwe-pop kunye nomculo wokudanisa . Ezinye zee-albhamu ziye zazakhela iindwendwe ngokukhawuleza kwiminyaka njengenqweno yeentlanga, ngelixa abanye babetha ngokukhawuleza kunye nokukhishwa kwezorhwebo ekukhululweni. Zonke ziyiirekhodi ezibalulekileyo zexesha. Ingeniswe ngaphandle komyalelo othile, nantsi ukukhangela kwi-albhamu ephezulu / i-rock yamaqhosha eyenza ipesenti enkulu yefuthe layo lemveli ngo-1980.
AC / DC - 'Emuva emnyama'
I-Cover Cover I-albhamu ye-Sony
Njengomnye wee-albhamu ezithengisa kakhulu kumculo wexesha lonke, le rekhodi ifinyelele isimo sengqungquthela ngenxa yobukhulu bayo, ukuhlala bethandwa kuphela. Nangona kunjalo, umlinganiselo ophawulekayo wokunyamezela oboniswe yi- AC / DC ukuba ubuyele ngokukhawuleza kwi-studio emva kokufa okungahambi kakuhle kwe-frontman Bon Scott inokuba yinto ebalulekileyo ngokwenene yokukhululwa, kuxhaswa ngumntu owaziwayo ngokusemthethweni njengengxondorha eqinile. Utshintsho uBrian Johnson unokuba ngumthunzi nje weScott njengobabini belizwi kunye ne-frontman, kodwa umsebenzi we-Angus Young wokubhala ngengoma kunye negitala uhlala unamandla kunje ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni kule klasiki.
I-Joy Division - 'Ekufutshane'
I-Cover Cover Umfanekiso Ulungelo lwe-Qwest / WEA
Nangona kukude kwenye yee-albhamu eziphulaphule kakhulu zee-80s, udonga olulodwa olukhethekileyo lwezandi ezivela phambili eBrithani emva kweengoma ze-punk zenza isandi esinamandla esinamandla. Emva kwexesha u-Ian Curtis uhlabelela njengokungathi yonke ingoma yomsindo wokungcwaba (okuyiyona nto inkulu kakhulu), kwaye ibhanti idala ukudibanisa okukwi-electronics kunye nama-guitar angangqinekanga angabikho abaculi abaye baphendula kuba kungakhathaliseki ukuba bazama kangakanani. Nangona le bhanki yayingekho ngaphambi kokukhutshwa kwe-albhamu (njengenzuzo yokuzibulala ku-Curtis 'ngoMeyi 18), ixesha elifutshane lobomi be-Joy livelise umzimba womsebenzi onamandla kunye nelifa elihlala njalo.
Abazenzayo - 'abazenzayo'
I-Cover Cover I-albhamu ye-Sire
Abayilungu babengaphezulu kweqela lamatye okwenyaniso kunokuba kukho nawuphi na umculi omtsha ukuba avele ngexesha lama-80s. Okokuthi, ilungu ngalinye linikezela ngeminikelo ehlabayo, eyimfuneko eyayikunceda ukuba idale yonke into ebangel 'ukuba yayingaphezulu kwemali yeqela. Nangona uChrissie Hynde owayengumdlali weengoma eziphambili, ugqirha uJames Honeyman-Scott wayephethe uxanduva lokuhlaselwa kwebhanki kodwa echanekileyo. "Oxabisekileyo," "Tattooed Boys Boys" kunye ne "Mystery Achievement" akazange ayenze ukusikwa kwenkululeko enkulu yokukhupha, ebonisa indlela esi siqine ngayo le albhamu isukela ekuqaleni ukuya ekupheleni.
UBruce Springsteen - 'Umlambo'
Nangona zikhutshwe ngokupheleleyo kwii-80s zengqondo, le ngcaciso ephindwe kabini ye-albhamu imele ukuba iminye imimculo engcono kakhulu ekhutshwe ngexesha lama-80s okanye nayiphi na ixesha lexesha leliwa. Ikhwalithi eqhubekayo ye-albhamu kaBruce Springsteen ihlale ibenza ukuba babe ngabaviwa kwizintlu ezingcono, kodwa le rekhodi ingakumbi ityelelo lokunyanzela. Ingaba ngokuthandana ngothando xa ulangazelela i-traancholy ye-track title, intsapho eguquguqukayo "Usuku lokuzimela," okanye ukunyaniseka kwe "Out Street Street", i-Springsteen idala iifrajithi ezicacileyo zeengxaki ze-blue collar kunye nokuncintisana apha njengoko zibandakanyeka nanoma yiyiphi ukusuka emsebenzini wakhe omde kunye nobunzima.
Amaphoyisa - 'Zenyatta Mondatta'
I-Cover Cover I-albhamu ye-A & M
Omnye wee-80s ezimbalwa ezenza ukukhulula umculo kumgangatho we-albhamu ngokungathi nakwizinga elilodwa, Amapolisa abe njengenye yeenkokeli ezingenakucingelwa ngombala naphezu kwexesha elifutshane lobomi lobunzima. Le albhamu ngokuqinisekileyo ibonisa ukuphumelela kwayo, ukuhambisa ama-pop angama-pop njenge-"Do not Stand So Close to Me" kunye ne "De Do Do, De Da Da Da" kwakunye neengoma ezixinayo, ezinomdla njenge-"Drived to Tears" kwaye "Canary kwiCoalmine." Ngaphezu koko, i-albhamu yayiphuthuma ngokukhululeka ukuze ihlangane nemfuno ekhulayo yamaPolisa kwindlela yokutyelela, eyenza ukugqwesa kwerekhodi yonke into emangalisayo.
Kennedys Abafileyo - 'Izithelo Ezintsha Zokutshiza Imifuno'
I-Cover Cover I-albhamu yesiXhosa
Into enhle malunga nokugweba i-albhamu ayifanele ixhomeke kakhulu kuyo yonke into eyenziwa ngetshati okanye ukuthandwa ngokuqhelekileyo, njengoko impembelelo yokukhutshwa kwexesha elipheleleyo ingahlolwa ngokuthe ngcembe ngempembelelo kunye nokuhlala ngamandla. Kodwa akwenzeki ukuba yeyiphi imigaqo esetyenziselwa ukuqwalasela le albhamu, i-brittering, ibhande eliqaqambileyo evela kwiintlabathi zaseSan Francisco zezobupolitika. Ukuhlambalaza kunye nokuhlaselwa kweso sonya kweJello Biafra & Co. kubonakala kunzima ngeli xesha, kodwa ukubhala kwengoma ephezulu kunye nokudlala kwenza le nto ikhululwe enye yeyona ndawo eyona ndawo ihamba phambili kakhulu, ibe yinto eyahlukileyo.
I-Clash - 'London Calling'
Nangona kuyiqiniso ukuba ukukhulula i-albhamu ephindwe kabini igxininisa ukukhululwa kokubaluleka, loo mbono ayenzi mmahluko ukuba umculo uhluleka ukugcina ukugqwesa. Into enhle, ngoko, ukuba i-Clash yathatha eli thuba ukurekhoda enye yee-albhamu ezigqibeleleyo zesebe, ukukhupha i-classic ye-classic ehamba ngeendlela ezininzi zomculo. Iipolitiki ezisemgangathweni ezisemgangathweni, ezitshintshileyo zithatha iinjongo ezifana ne "London Calling" kunye namaBombs aseSpanish, kodwa amanqanaba amanxulumano obuntu kunye nezopolitiko kwimiba enjengokuthi "Ukufa okanye Ukuzukiswa" kunye "Elahlekile kwiSpermarket "i-jaw-dropping.
I-Pink Floyd - 'I-Wall'
I-Album Cover Cover umfanekiso weCapitol
Ukutshatyalaliswa nangona kunjalo, kunye nokunyanzeliswa ngu-Roger Waters 'megalomania nangona kunjalo mhlawumbi, le albhamu yecandelo elikhulu liqulethe umculo ongenakuphikisana onokubambelela ngokugqithisileyo kwiminyaka emashumi amathathu kamva. Kwaye, ngokwenene isizathu esithile sokuba abanye bangakwazi ukuyibona le nyaniso kukuba phantse sonke siphumelele kwisigaba esikhulu se- Pink Floyd esingazibuyisela le albhamu kwiimeko ezipheleleyo. Nangona kunjalo, iingoma ezinjenge "Mama," "Hayi Wena," kwaye "U-Numb ngokuqinisekileyo" uqhubeka njengamaqhinga okuqhayisa ngokugqithiseleyo abonakalisa ingoma ebunzulu yamanzi kunye ne-guitar yaDavid Gilmour.
Ukumkanikazi - 'Umdlalo'
Nantoni na enokucinga ngayo i-70s ye-Queen's excessively, i-brick yaseBrithani eqhelekileyo kwaye engayibalekiyo ihlangene nokufika kwee-80s kunye nomzamo wayo obalaseleyo. Emva koko, zingaphi iindidi zanoma yiphina ixesha elinokuthi likwazi ukugqithisa isibhakabhaka phakathi kwembalo zayo ezimbini ze-1 ze-pop ezivela kule rekhodi - i-anthem engummangaliso ngokucacileyo "Omnye ubetha umdaka" kunye ne- rockabilly enobulumko " "? Kodwa oko bekuhlala kubungangamsha nje kuphela kweet talente eziphezulu kakhulu zikaFreddie Mercury kodwa nakwezinye ezintathu, ezihlala ziphantsi kwamalungu ale quartet.
X - 'eLos Angeles'
I-Cover Cover Umfanekiso I-Courtesy ye-Rhino / WEA
Khangela akukho ngaphezu kwe-albhamu yokuqala kwi-city's sign signature i- punk / roots root band kubungqina bemoya engapheliyo ye-"70's punks scene "yaseMzantsi California. Ngokwezinye izinto ngokungenakulungiswa njengama-punk abaculi, i-quartet empeleni yayisuka kwimimandla echaphazelayo kunye nefuthe, ngokukodwa i-rockabilly guitar efezekisiweyo ngokucetyiswa ngu-Billy Zoom kunye nabantu, ilizwe kunye neengoma zengoma zengoma ezihlolwe ngabaculi abahamba phambili uJohn Doe no-Exene Cervenka. "Ifowuni yakho icima iHook, kodwa awunjalo" kwaye "uJohnny Hit kunye noPaulene Paul" ayinakukwazi ukukhutshwa ngokukhawuleza kunye namandla ahlanzekileyo. Kodwa oko kungokuqala kwesi sigqibo sobulumko.
Amagama amaninzi amaninzi kuma-80s
I-ad hominem (fallacy)